.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: iSWF Player For Android
iSWF Player For Android
Android ဖုန်းတွေမှာ Flash Song တွေ နားထောင်ချင်ရင် ဒီ SWF Player လေးက တော်တော်လေးကို ကောင်းတယ်။
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး SWF Player2ခုထဲက တစ်ခုပါ။ ဖုန်းထဲက SWF ဖိုင်တွေ ဖွင့်လို့ ရှာလို့ အရမ်းလွယ်ကူတယ်။
ပြီးတော့ သီချင်းဖွင့်နားထောင်ရင်း ရပ်ထားလို့လည်း ရပါတယ်။ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
Download: iSWF Player For Android
အဲ..ပထမဦးဆုံး ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ Adobe Flash Player တော့ Install လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ မရှိသေးရင်တော့..
Download: Adobe Flash Player For Android
Screenshot လေးတွေကိုတော့ အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်..။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ...။
မှတ်ချက်။ ။ ပြန်လည်ကူးယူမျှဝေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့် Blog ကို Credit ပြန်ပေးပါရန်။ ကျေးဇူးအထူးပါ။
Posted by Thurainlin at 08:31
Labels: Android App, Flash, Flash Song